जान्नुहोस् औँलामा कति वटा च्रक हुने मान्छे भविष्यमा कस्तो ? कति शंकको फल के ? – Sandesh Press
August 5, 2021 276
औलाहरूको र औठाको टुप्पोमा जुन भुमरी झै घुमेको हुन्छ त्यसलाई चक्र भनिन्छ। जुन व्यक्तिको औंलामा यस्तो प्रकारको चक्र छ भने जातकको धार्मिक प्रवृत्तिको र धर्ममा जोडिएको कार्यमा विशेष रुचि हुन्छ। साथै ऐर्श्वर्यद्वारा पुर्ण उत्तमजीवन विताउँदछन्।
यस्ता व्यक्तिहरू रहस्यमय, व्यवहारिक विचार बला बनाउनुको साथै अनुसन्धान र नयाँ विचारको जन्म दिनेखालको हुन्छन्।
Prev२६ करोड रुपैयाँको औषधि असफल, उपचारपछि पनि ११ महिनाकी बालिकाको मृ’त्यु
Nextयी ४ राशिलाई मिल्नेछ सबैभन्दा ठुलो सफलता, तपाइँको राशी त परेन ?